नेपालमा फेरि लकडाउन ! « Janata Samachar
नेपालमा फेरि लकडाउन !
काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ अर्थात कोरोना भाइरसको पहिलो लहर नसकिदै दोस्रो लहरको जोखिम बढेको छ । विश्वका अन्य देशहरुसंगै छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत पछिल्लो समय कोरोना संक्रिमतको संख्या ह्वातै बढेको छ । त्यसले नेपाललाई समेत ठूलो जोखिममा पार्ने खतरा बढेको छ । भारतमा केही सातायता नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरस सहित तीव्र रुपमा संक्रमित संख्या बढेसंगै नेपालमा पनि सर्तकता बढाइएको छ ।
भारतमा संक्रमण दर बढेलगत्तै त्यहाँका विभिन्न सहरमा लकडाउन हुन थालेपछि रोजगारीका सिलसिलामा गएका कयौं नेपाली स्वदेश फर्कन थालेका छन् । केही दिनयता सीमा नाकामा स्वदेश फर्कंदै गरेका नेपालीहरुको चाप बढ्न थालेको छ । यता नेपालमा भने संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिने जोखिम बढेपछि सीमामा सतर्कता बढाउन थालिएको छ ।
पछिल्लो दिनमा नेपालमा समेत कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएपछि कतै सरकारले फेरी लकडाउन त गर्दैन भन्ने विभिन्न शंका आशंका उब्जिन थालेको छ । यदि हामीले विगतबाट पाठ सिकेनौ र स्वास्थ्य मापदण्ड नपनाए पुन भयवहको अवस्था आउन सक्ने स्वास्थ्यविद्हरुले बताएका छन् । अहिले बेलैमा सतर्कता नपनाए लकडाउन गर्न पर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने तर्फ सुझाएका छन् ।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार तत्काल लकडाउनको तयारी नभएको बताएको छ । अहिले सरकारले देशको सीमा नाकादेखि सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्डबारे जनचेतना बढाएको र सबै नाका क्षेत्रहरुमा आवश्यक तयारी र परिक्षणको मात्र बढाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.समिरकुमार अधिकारीले बताउनुभयो ।
छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको दर उच्च गतिमा बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले एक साताअघि सीमा नाकामा सुरक्षा कडा पार्न निर्देशन दिएको थियो । सीमामा मात्रै होइन देश भित्रै पनि सतर्कता अपनाउन गृहमन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि स्वास्थ्यमन्त्रालयले पनि विज्ञाप्ती जारी गर्दै भारतमा संक्रमणको अर्को लहर शुरु भएकोले नेपालमा पनि पुनः कोरोना संक्रमण पहिलाकै गतिमा फैलिन सक्ने भन्दै सतर्क हुन अपिल गरेको छ । सभा, जुलुस, ¥यालीलगायतका गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ । यता कोभिडि–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) ले पनि सिमानाका देखि स्थानीय सबै क्षेत्रमा सर्तकता अपनाउन निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव खगराज बरालले जानकारी दिनुभयो ।
सबैतिर फेरी पनि लकडाउन हुन्छ की भन्ने हल्ला चलिरहँदा सरकार तत्काल लकडाउन गर्ने सोचमा नभएपनि अवस्था हेरेर लकडाउन हुन सक्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् । सचिव बरालले भारतबाट आउजाउ गर्ने नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य जाँच र क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सबै प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय तथा सीमा नाकाका हेल्थ डेस्कलाई निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै मुलुकभरका अस्पताल महामारी व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा राख्न समेत मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा एकदिनमा ८० हजार भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भैराखेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा दैनिक हजारौं संख्यामा कोरोना संक्रमित बढीरहँदा भारतबाट नेपाल आउनेहरुको संख्या पनि सिमा नाकामा बढ्दो छ । त्यसैले पनि नाकामा बढी सतर्कता अपनाउनु पर्ने जनस्वास्थ्यविद्हरुले जोड दिएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने केही साता अघिको तुलनामा पछिल्ला दिनमा दैनिक संक्रमितको संख्या समेत बढेको देखिन्छ । विगतमा भारतबाटै बढी कोरोना भित्रिएको भन्ने गरिएकोमा अहिले भारतको अवस्था थप भयवह बन्दै गरेको अवस्थामा नेपालमा पनि स्थिती भयवह हुनसक्ने आकलन गरिएको छ ।